VaTomana Vonetsana neBoka Riri Kuferefeta Nyaya dzeHuori
Paita kukandirana makobvu nematete pakati pesangano rinoongorora nyaya dzehuori reAnti-Corruption Commission nemuchuchusi mukuru wenyika, VaJohannes Tomana, panyaya yekuongorora makurukota ehurumende anonzi haana kufambisa zvakanaka mari dzebudiriro yematunhu kana kuti Constitutncy Development Fund.
Vane ruzivo nezviri kutika vanoti mambure enyaya iyi anenge ange otanangira kune mamwe makurukota muZanu-PF izvo zvotyirwa kuti zvinogona kunge zvosvibisa bato iri.
Vakuru muZanu-PF vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio7 kuti nyaya yekusunga nhengo dzeZanu-PF iyi inenge yange yokanganisawo tsoro yebato iri, iro rinonzi riri mubishi kuronga kusunga makanzura akawanda eMDC nenhengo dzedare reparamende dzebato iri senzira yekutsvaga rutsigiro musarudzo richiti MDC inoita zvehuori.
Pamhemberero yebhavhudhe ravo kwaMutare mwedzi wapera, VaMugabe vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuzviziva kuti makanzura eMDC ari kuita zvehuori.
Zvinonzi VaMugabe nemutungamiri wehurumende ,VaMorgan Tsvangirai, vakange vasumwa nezvekusungwa kwenhengo idzi vakatendera kuti zviitwe. Vaviri ava ndivo vave kutarisirwa kuti vapindire mukugadzirisa gakava pakati paVaTomana neAnti Corruption Commission. VaTomana vanoti havadi kuti vapihwe nyaya dzisina kunyatsoferefetwa.
Vasungwa kusvika pari zvino vakaendeswa kumatare asi vakapihwa mari dzechibatiso vanoti mumiriri weMagunje, VaFranco Ndambakuwa veZanu-PF, vatatu ve MDC vanoti mumiriri we St Marys, VaMarvellous Khumalo, mumiriri wePumula, VaAlbert Mhlanga, uye VaCleopas Machacha vekuKariba.
Sachigaro weAnti-Corruption Commission, VaStanford Chirindo, vanoti havasi kuzodzokera kumashure panyaya iyi.